May 27, 2020 - UpdateNew
အသက်မပြည့်သေးဘဲ ပြည့်တန်ဆာလောကထဲ ရောက်သွားရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရန်ကုန် – ကျွန်တော်မျက်မှန်းတန်းမိနေတဲ့ ပြည့်တန်ဆာမလေးတစ်ယောက်ကို HIV ပိုး ရှိသူများ အားထားရာ ရန်ကုန်မြို့က အခမဲ့ ဆေးပေးခန်းတစ်ခုမှာ မကြာသေးခင်က တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ အသက် ၄ဝ ဝန်းကျင် အရွယ် အမျိုးသမီးဟာ သူ့မိခင်ဖြစ်ပြီး သူ့လိုပဲ […]
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၂၇) ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေဝသအခြေအနေ ခန့်မှန်းချက် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့ တွင် မုတ်သုံလေ အားနည်းနေပါသည်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက် တောင်ပိုင်းတွင် တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် တိမ်အနည်းငယ် ဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိ […]
အွန်လိုင်းကနေ ပုရစ်ကြော် ၀ယ်စားကြသူများ သတိထားကြပါ ပုရစ်ကြော် ၁၀ ကောင်လောက်စားပြီး နာရီဝက်အတွင်းယားပြီးနီရဲလာတာနဲ့ ဆက်မစားရဲတော့ဘူး စားပွဲပေါ်က ပုရစ်ကြော်ဘူးကို ညကျ ပုရွက်ဆိတ်တက်လာတယ် နောက်နေ့ သေနေတဲ့ ပုရွတ်ဆိတ်အပုံသာကြည့်တော့ဘယ်လောက် ပိုးသတ်ဆေးတွေသုံးပြီး ဖမ်းထားလဲ မသိဘူး လူစားရမဲ့ ပုရစ်ကို ပိုးသတ်ဆေးသုံးပြီး ဖမ်းသတ်တယ်ဆိုတော့ ပြောစရာမရှိတော့ဘူး […]
ယခု လာမယ့် ၂၀၂၀ ဇွန်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေကြတ်ခြင်းနှင့် လကြတ်ခြင်း ကို မြင်တွေ့ရမယ့် နေ့ရက်များ ယခု သတင်းကို ( အာကာသနှင့် စကြဝဠာ ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် နေကြတ်ခြင်း နှင့် […]
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား ဈေးလုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းမှ သားမယားပြုကျင့်မှု
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား ဈေးလုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းမှ သားမယားပြုကျင့် အရွယ်မရောက်သေးသည့် အသက် ၁၂နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်အား ကုန်စိမ်းဈေး လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းမှသားမယားပြုကျင့်မှု မေလ ၂၆ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ တညင်းကုန်း ကုန်စိမ်းဈေး၌ ငှက်ပျောသီးရောင်းနေသူ တရားလိုသည် […]
မင်္ဂလာပွဲပြီးတော့ ဟန်းနီးမွန်းခရီးသုံးလထွက်ပြီး .လေဖြတ်ထားတဲ့ ဖခင်အခန်းကို ၀င်ကြည့်လိုက်သောအခါ..-
မင်္ဂလာပွဲပြီးတော့ ဟန်းနီးမွန်းခရီးသုံးလထွက်ပြီး .လေဖြတ်ထားတဲ့ ဖခင်အခန်းကို ၀င်ကြည့်လိုက်သောအခါ.. ဒီအဖြစ်အပျက်ကအပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ မိသားစုအတွက်အများကြီး ဒုက္ခခံစွန့်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးမီးစာကုန်ရေခမ်းတဲ့ အချိန်လေးပေါ့ သားနှစ်ယောက်မွေးထားခဲ့တယ်….ဇနီးသည်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး အသက်အရွယ်အိုမင်းမစွမ်း ဖခင်ကြီးဟာ….လေဖြတ်ပြီး ကိုယ်မှာအရေပြားရောဂါ စွဲကပ်ခဲ့တယ်…. တစ်နေ့အိမ်မှာသား တစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲဖြစ်တော့ ဖခင်လူမမာကြီးကို ပွဲထုတ်ရမှာရှက်လို့ဆိုပြီး… အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ ချောင်ပိတ်ပြီးသော့ခတ် ထားကြတယ်…. […]
အထူးသတိထားသင့်တဲ့ နေ့အလိုက် နေပတ်လမ်းကြောင်း ဖြတ်သန်းနိုင်သောမြို့များ နှင့် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်တဲ့အခြေအနေများ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှာ လားရှိုးမြို့ကို ဖြတ်သန်းမှာဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၂၁ရက်နေ့မှာတော့ ကသာမြို့အနီး ကနေ ဖြတ်သန်းပါ့မယ် အဲ့ဒီနောက် မြောက်ကမ္ဘာခြမ်းကနေ တောင်ကမ္ဘာခြမ်းကို ပြန်ဆင်းလာမယ့် နေကြာင့် နေပတ်လမ်းကြောင်း ဟာ ဇူလိုင်လ […]
“အချစ်ကြီးသလောက် အမျက်ကြီးတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး”
“အချစ်ကြီးသလောက် အမျက်ကြီးတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး” ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အမှန်တရားကို နှစ်သက်ကြပြီး တစ်ယောက်ထဲ နေထိုင်ရခြင်းကို မြတ်နိုးတက်ကြပါတယ်။ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ညစ်နေပါစေ ကိုယ်ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ ပျော်ရွှင်လာအောင် အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးတတ်ပါတယ်နော်. တစ်ခါတလေမှာ သူငယ်ချင်းများအပေါ် နွဲ့ ဆိုး ဆိုးပေမဲ့ ရစ်တတ်ကြပေမဲ့ အနစ်အနာအရမ်းခံတတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် […]
အမွှာညီအစ်မနှစ်ဦး မပျောက်ဆုံးမီ ဧရာဝတီတံတားကြီးပေါ်ဆိုင်ကယ်နှင့်ဖြတ်သန်းပုံ မှတ်တမ်း
အမွှာညီအစ်မနှစ်ဦး မပျောက်ဆုံးမီ ဧရာဝတီတံတားကြီးပေါ်ဆိုင်ကယ်နှင့်ဖြတ်သန်းပုံ မှတ်တမ်း “စစ်ကိုင်းတံတားခေါ် အင်းဝတံတားကြီးပေါ်မှ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ခုန်ချ အဆုံးစီရင်သွားသည်ဟု ယူဆရသူအမွှာညီအစ်မနှစ်ဦး မပျောက်ဆုံးမီ ဧရာဝတီ တံတားကြီးပေါ်ဆိုင်ကယ်နှင့်ဖြတ်သန်းပုံ မှတ်တမ်းတွေ့ရစဉ်” ယခုအခါ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မြန်ရောဂါ လှုပ်ခတ်မှုနှင့်အတူမေလ ၂၄ ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းတံတားခေါ် အင်းဝတံတားကြီးပေါ် တံတား၏အလယ်ဗဟိုတည့်တည့်တွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မတွေ့ရှိဘဲ […]
၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ (၈)ရက်မှ(၁၅)အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ယတြာပြုရန်ဟောစာတမ်း